Calzone uye Pizza: A Dynamic Duo
Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Calzone uye Pizza: A Dynamic Duo
Iyo Batman Calzony
Iyo Batman Calzony inogadzirwa nekusanganisa mudiwa wepizza ega ine simba duo: calzone uye pizza. Ichi chigadzirwa chakaita sechiremwaremwa chine chimiro chinonaka chebuttery-kuravira, calzone crust yakazadzwa negariki chena sosi, chizi, uye julienned pepperoni, yakasanganiswa nepizza yepepperoni uye inoshandiswa nedivi reCrazy Sauce®. Chinhu chitsva chemenu chichave chiripo ne $7.99 kutanga Ndira 24.
"Chero chero munhu anogona ikozvino kuunza superhero vibes kuPizza husiku nekuyedza itsva The Batman Calzony, "akadaro Jeff Klein, mukuru wekushambadzira kuLittle Caesars, "Ndicho chikamu chinonaka chekubatana kwedu nefirimu riri kuuya. The Batman. "
Iyo Crazy Calzony yakatanga kuunzwa naMadiki Caesars muna Nyamavhuvhu 2021 sechipo chenguva shoma, ichiwedzera chekare chekare kune cheni yatove nenhoroondo menyu.
Vatengi vanogona kuodha The Batman Calzony kuti iendeswe vachishandisa iyo Little Caesars app, kana kufanobhadhara uye vobva vatora zviri nyore odha yavo vachishandisa Pizza Portal® pickup (inodziya, inozviitira nharembozha yekurodha chiteshi) pane chero nzvimbo inotora nzvimbo yeMadiki Caesars. Vatengi vanogona kumira pakati pa 4 pm na8 pm kuti vatore The Batman Calzony vasina kufanoronga.
*Kuwedzera mutero pazvinoshanda. Inowanikwa munzvimbo dzinotora chikamu. Mitengo inogona kusiyana. Mitengo inogona kunge yakakwira muAK, HI, CA uye yechitatu-bato yepamhepo masaiti. Kutumirwa kunowanikwa kubva kunzvimbo dziri kutora chikamu nemaodha epamhepo chete. Mari dzekutumira dzinoshanda. Mari yekuodha diki yemaodha isingasviki $10.
ZVINHU ZVINHU ZVIKOSESARS®
Inotungamirwa muDetroit, Michigan, Little Caesars yakavambwa naMike naMarian Ilitch muna 1959 seresitorendi imwe chete, yemhuri. Nhasi, Little Caesars ndiyo yechitatu yakakura pizza cheni pasi rose, ine zvitoro mune imwe neimwe ye50 US States uye makumi maviri nenomwe nyika nenzvimbo.
Inozivikanwa nepizza yayo HOT-N-READY® uye ine mukurumbira Crazy Bread®, Little Caesars yakanzi "Best Value muAmerica" ​​kwemakore gumi nemana apfuura (zvichienderana neongororo yenyika yose yevatengi veresitorendi yekukurumidza sevhisi inoitiswa naSandelman & Associates - 14. -2007 ine musoro unoti "Yakakwirira Yakayerwa Chain - Kukosha Kwemari"). Zvigadzirwa zveCaesars zvidiki zvinogadzirwa nemhando yepamusoro, senge nyowani, isina kumboonda, mozzarella uye Muenster cheese uye muto wakagadzirwa kubva kutsva-yakazara, yakaibva muzambiringa yakapwanyika madomasi eCalifornia.
Kambani inokura zvakanyanya ine makore anopfuura makumi matanhatu echiitiko muindasitiri yepizza yemadhora bhiriyoni zana nemakumi mana neshanu, Little Caesars arikuramba achitsvaga vanoda mafranchisee kuti vabatane nechikwata chedu mumisika yepasirese. Pamusoro pekupa mukana wekuzvimiririra kwebhizimusi mune franchise system, Little Caesars inopa ruzivo rwakasimba rwemhando nemumwe weanonyanya kuzivikanwa uye anokwezva mavara munyika, Little Caesar.
Warner Bros Mifananidzo Inopa 6th & Idaho/Dylan Clark Productions Production, Matt Reeves Firimu, "The Batman." Iyi firimu yakarongerwa kuvhurwa munzvimbo dzemitambo pasi rose kutanga 2 Kurume uye munyika yose 4 Kurume 2022; ichagoverwa pasi rose neWarner Bros. Mifananidzo.
Mutsva Wekiriniki Yekuyedza Yekuferefeta Mushonga Mutsva Wekurapa Alopecia
Brits 'Favorite TV Shows Zvave Kupa Kukuru Kurega Basa
Outdoor Survivalist Bear Grylls paQ & A Session
Jean-Michel Cousteau Resort Fiji Inovandudza Kudyira Kwevaenzi...
Kubata Chirwere Chemoyo Pakutanga
Sir Richard Branson: Kurukurai, Ngatizviitei!
Roma Kusangana Nematambudziko Ekudzosa Tourism ...
Tics muVechidiki Yakabatana neSocial Media
Global bhizinesi rekufamba kudzoreredza inoona mbiri-manhamba kuvhiya
Mental Health Disorders Skyrocket MuVechidiki uye Vadiki ...
New Condor nonstop Frankfurt kuenda kuPhoenix nePortland...
Iyo Nyika Yekufamba uye Kushanya muHondo Nguva
Kuvimbisa Mafungiro Matsva muKushanda kweCancer...
Prague Tourism Mhinduro kuUkraine Vapoteri
4 emaguta akanyanya kuzorora pasi rose ari muUS
IEC - International Chiitiko Certification Yauya ...
Skal New Orleans Inokwidza $5,000 yevapoteri vekuUkraine
Vazhinji vekuAmerica Kupfuura Kumbotsvaga Hutano Hwepfungwa
Lufthansa ikozvino inobatanidza kabhoni-neutral kubhururuka sarudzo ...
New breakthrough therapy designation yekervical...
Russia 'kuchengeta' ndege dzakarenda ...
Savaadheeththa Dhathuru Yacht Rally Maldives – A...
China inoraira vakuru vakuru vayo kuti vabvise ...
Ureter Stent Market Key Vatambi, SWOT Ongororo, Kiyi ...
Vancouver to Brisbane ndege pa Air Canada izvozvi
Maonero matsva mu Natural Killer Cell yeAnti-Cancer ...
India Kuzivisa New National Tourism Policy
Yakavanzika Kutyisidzira kweKudimburwa Kunoenderana nePeripheral...
Ndege nyowani kuenda kuNew Brunswick paSwoop